Alụlụụ mmiri: njirimara, ojiji na mkpa | Network Meteorology
El mmiri uzuoku ọ bụ ihe ọzọ karịa ọnọdụ ikuku mmiri mgbe ọ gafere na mmiri mmiri gaa na gas. Maka alụlụlụ mmiri, a ga-ekpughere ya na ọnọdụ okpomọkụ dị nso na ebe esi. Igwe a dị mkpa maka okirikiri mmiri, mmalite nke ndụ na okpomoku ụwa.
Ya mere, anyị ga-enyocha miri emi alụlụ mmiri, njirimara ya na mkpa ya.
2 Nhazi nke alụlụ mmiri
3 Iji mmiri vepo
Ọ bụ ihe ọzọ karịa ndị nnọchi anya steeti mmiri mgbe ọ na-agbanwe mgbanwe site na mmiri mmiri a gaa na gas. Alụlụ a enweghị ntụ na-esi ísì ụtọ, ọ bụ ezie na ọ na-enwetakarị ọdịdị ọcha na urukpuru mgbe a na-etinye ya na obere mmiri mmiri dị na mmiri mmiri. Alụlụụ mmiri dịkwa nwere ike belata visibiliti dabere na njupụta ya na ebe i no. Dịka ọmụmaatụ, anyị hụrụ na enwere ike ịhụ alụlụ mmiri nke ọma mgbe anyị na-apụ ịsa ahụ wee mechie windo ime ụlọ ịwụ. Nke a bụ ebe alụlụ mmiri na-agbakọ ma ghọọ mmiri mmiri ka ọ na-arapara n'ahụ mgbidi.
N’okike, a na-emepụta uzuoku mgbe mmiri dị n’ime ala na-eme ka ọ dị ọkụ site n’usoro mgbawa ugwu ụfọdụ. Usoro mgbawa ndị a na-ebute isi iyi na-ekpo ọkụ, geysers, fumaroles, na ụfọdụ ụdị ugwu mgbawa. Geysers bụ ụdị mmiri pụrụ iche pụrụ iche. Enwere ike ịmepụta Steam site na teknụzụ dị ka mmanụ ọkụ na ihe nrụpụta nuklia. N'ụzọ dị otú a, anyị maara nke ahụ Alụlụụ mmiri bụ ihe dị mkpa na-enye ume maka ụlọ ọrụ. Ma ọ bụ na ọtụtụ usoro nhazi nke ọkụ eletrik na-eburu n'uche ikike alụlụ mmiri ịkwaga turbines.
Enwere ike ihu ya n’ụbọchị oke mmiri dị, n’igirigi dị ugbu a mgbe chi bọrọ ma ọ bụ mgbe gburugburu ebe oyi dị na ikuku bụ nke isii site n’ọnụ. Ikuku dị n'ime ọnụ nwere mmiri na mmiri nke a na-akwụ ụgwọ ya site na ịbịakwute ikuku oyi.
Nhazi nke alụlụ mmiri
Ka anyị hụ ihe bụ isi usoro nke mmiri vepo na-eme. Esi mmiri bụ usoro anụ ahụ nke mmewere a na-agbanwe site na mmiri gaa na gas dị ka nsonaazụ nke ogologo oge na oke ọkụ. Esi mmiri ọkụ nke mmiri dị ogo 100. Ọ bụ na okpomọkụ ndị a ebe mmiri na-amalite sie. Ma, mmiri ekwesịghị ịdị ndụ tupu alụlụ mmiri adị.
Ozugbo mmiri mmiri ahụ rutere ebe a na-esi ya, ọ na-amịkọrọ okpomọkụ iji mee ka mmiri ahụ ghọọ vapo, mana okpomọkụ ya anaghị abawanye. Mmiri mmiri niile ga-emecha ghọọ steam ruo mgbe mmiri mmiri mmiri ahụ agwụla. Anyị na-ahụ usoro a dị mfe mgbe anyị esi mmiri n’ite. Anyị ga-amarakwa na mmiri na-ekpo ọkụ nke mmiri na-adabere na nrụgide nke ekwuru ihe. Dịka ọmụmaatụ, na igwe na-enye nsogbu, isi nri na-ewere ọnọdụ ngwa ngwa n'ihi nrụgide nke ite ahụ n'onwe ya na-eme, mmiri na-ekpo ọkụ nke mmiri dị ala.
Iji mmiri vepo
Dị ka ị nwere ike ịtụ anya, alụlụ mmiri nwere ọtụtụ ojiji n'ọtụtụ ebe. Ka anyị hụ ihe ojiji ndị a niile bụ:
Steriji nri: mmiri vepo na-eji wepụ microorganisms dị na nri. Imirikiti microorganisms na-anwụ mgbe ekpughere ha na okpomọkụ. Maka nke a, a na-eji alụlụ mmiri mee ka mmiri ghara ịchapu mmiri ma ọ bụ ụfọdụ ihe dị ka ụlọ eji ekpuchi mmebi.
Ọrụ Injin: Enwere otutu injin na-arụ ọrụ site na combustion nke mmanụ ọkụ na-agbanwe ike ọkụ nke oke mmiri n'ime ike ọrụ. Nke a bụ otu igwe ọrụ ụgbọ mmiri si arụ ọrụ.
Atọzị: atomizing abughi ihe ozo karia iwepu obere akụkụ. Ọ bụ usoro na-enye ohere ịkewa ihe n'ime obere pere mpe. I nwekwara ike iji usoro nke ihe eji eme ihe nke na-enye ohere mmiri ka ọ gbasaa site n'inwe obere ntụpọ dị ka ịgba.
Dị ọcha: mmiri bu ihe mgbaze uwa nile. I jiri mmiri hichaa ụdị ihe niile. Enwere ike iji Steam mee ihe maka nhicha. Site na ngwaọrụ ndị na-eji teknụzụ ụgbọ mmiri arụnyere, ọ na-enye ohere ịbawanye ike ma hichaa ntụpọ dị mgbagwoju anya dịka ndị na-agbakọta na kapeeti, arịa ụlọ ma ọ bụ uwe.
Hydration: A na-atụ aro usoro nri uzuoku maka nri niile dị mma ebe ọ na-enye ohere ịchekwa vitamin, nri na mmiri mmiri nri.
Humidify: ọtụtụ n'ime ihe ndị na-eme ka mmiri dị mmiri mmiri na-enwe ike imeziwanye ọnọdụ gburugburu ebe obibi site n'ịbawanye iru mmiri ahụ. E nwere ọtụtụ ụdị humidifiers dabere ma ha ikusi ultrasound mmiri ma ọ bụ ndị na-eme ya site na okpomọkụ. Nke a kachasị mma karịa n'oge oyi ka ọ na-emekwa ka ọnọdụ ikuku dịtụ elu.
Dị ka anyị kwuru na mmalite nke isiokwu ahụ, alụlụ mmiri dị ezigbo mkpa na okike. Ọnụnọ ya na mbara igwe bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa. Ma ọ bụ na ihe dị mkpa nke mmiri mmiri dị na ọnụọgụ na-agbanwe agbanwe. Onu ogugu na ikuku bu ihe dika 3%. Na mpaghara ndị ọzọ kpọrọ nkụ ma ọ bụ oyi nke ukwuu dịka ogwe osisi, ịta ahụhụ dị ala.
N’agbanyeghi na apughi iji anya mmadu hu ya, n’elu ubochi doro anya enwere mmiri nke uzu mmiri. Naanị n'ihi na ọ bụ gas na-enweghị ụcha ma ọ bụ isi ísì, a naghị ahụ ya anya n'echiche, n'adịghị ka igwe ojii nke mmiri mmiri mmiri na-etolite na ọ bụ ya mere a ga-eji hụ ha. Ọ bụ ikuku griinụ kachasị na ikuku ma bụrụ nke kachasị ike niile n'ihi usoro kemịkal ya. Na mbara ala dị ọkụ karị, ka alụlụ mmiri dị na mbara igwe ka ọnụego ikuku mmiri si n'oké osimiri, ọdọ mmiri na mmiri ndị ọzọ dị n'ụwa.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere alụlụ mmiri na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mmiri uzuoku
Obere afọ ice